संसारको ध्यान नेपालमा: नेपालले गर्ने दुर्लभ प्रक्षेपणलाई नासाले लाईभ गर्ने ! यो खुसीको खबर सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गरौं — ''समर्पण मिडिया''
४, बैशाख २०७६
नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान साढे २ बजे नेपालले आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट (भू-उपग्रह) उडाएर अन्तरिक्षमा उपस्थिति जनाउँदैछ। नेपाली झन्डा र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को लोगोसहितको उक्त भू-उपग्रहलाई नेपाली स्याट-१ नाम दिइएको छ।
अमेरिकाको भर्जिनियास्थित स्पेस कम्पनी अर्बिटल एटिकेको रकेटबाट उडाइने भू-उपग्रहलाई नेपालको विज्ञान क्षेत्रकै एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष अध्ययन संस्था नासाले यो उडानको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। हामी नेपालका वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि देख्दै आएको सपना साकार हुँदैछ। नास्टको प्रविधि विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले हामिसँग भने।
उनका अनुसार नेपालले उडाउन लागेको स्याटेलाइट नानो वर्गमा पर्छ। नानो भनेको सानो आकारको हो, जुन एकदेखि १० किलोको हुन्छ। योभन्दा सानो स्याटेलाइट पनि हुन्छ, जसलाई पिको भनिन्छ। यसको तौल सय ग्रामदेखि एक किलोसम्म हुन्छ। हाम्रो स्याटेलाइटको तौल १ किलो ३ सय ग्राम छ। यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ १०-१० सेन्टिमिटर छ। यसले खिचेका तस्बिर र सूचनाले सम्बन्धित ठाउँको प्रारम्भिक अवस्था अध्ययन गर्न मद्दत पुग्ने ढकालले बताए।
यो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुगेपछि एक महिना इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा (आइएसएस) मा गएर बस्नेछ। यो भनेको अन्तरिक्षमा रहेको स्याटेलाइटहरूको ‘पार्किङ’ जस्तै हो। त्यहाँ अन्तरिक्षयात्रीहरूले यसलाई परीक्षण गर्नेछन्। प्राविधिक रूपले उपयुक्त छ भनेपछि बल्ल हाम्रो स्याटेलाइट पृथ्वी वरिपरि घुम्न थाल्नेछ।
‘बिहीबार उड्ने स्याटेलाइटले मे अन्त्यबाट पृथ्वीको चक्कर काट्न थाल्ने अनुमान छ। ढकालले भने, त्यसको तीन दिनपछि यसले तथ्यांक पठाउन सुरु गर्छ। यो स्याटेलाइटलाई पृथ्वीको एक चक्कर काट्न ९० मिनेट लाग्नेछ। यस क्रममा नेपालको आकाशमाथि दैनिक ५ देखि १० मिनेट रहन्छ। यसले पृथ्वीबाट करिब ४ सय किलोमिटर टाढा फन्को मार्नेछ।
तीन वर्ष आयु रहेको यो स्याटेलाइटले पठाउने तस्बिरहरू एकदमै सामान्य खालका हुने ढकालले जानकारी दिए। हुन त स्याटलाइटले खिच्ने तस्बिरबाट हावाहुरी, बाढी, प्रकोपदेखि नदीनाला र हिमालहरूको विस्तृत अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर, हाम्रो सानो स्याटेलाइट यति धेरै सूचना पठाउन सक्षम छैन। यसको क्यामराको गुणस्तर र क्षमता कम छ।
हाम्रो स्याटेलाइटले अमेरिका, बेलायत वा जापानका ठूला स्याटेलाइटले जस्तो काम गर्दैन। ढकालले भने, ‘आज उडाएपछि भोलिबाटै मौसमको ठीक ठीक पूर्वानुमान गर्न सक्छौं भन्ने होइन। यसले सामान्य जानकारी मात्र दिने हो। कुन ठाउँमा के भइरहेको छ भन्न सक्छौं, तर ठ्याक्कै क्षेत्र तोक्न सक्दैनौं। उदाहरणका लागि, चारकोशे झाडीमा आगलागी भएको तस्बिरबाट देखिए पनि ठ्याक्कै कुन ठाउँमा आगो लागेको हो यकिन हुँदैन। यसको निम्ति अन्य शक्तिशाली स्याटेलाइटको मद्दत लिनुपर्नेछ।
उनका अनुसार यो स्याटेलाइट जापानको क्युसु इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) सँग मिलेर बनाइएको हो। यसमा राष्ट्रसंघको सहयोग छ। क्युटेकले स्याटेलाइट नभएका नेपालजस्ता देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालसँगै श्रीलंकाको रावन-१ पनि प्रक्षेपण गरिँदैछ।
स्याटेलाइट बनाउन नेपाल तर्फबाट नास्टका प्राविधिक अधिकृत हरिराम श्रेष्ठ र नेपाली वैज्ञानिक आभाष मास्के जापानमै बसेर काम गरिरहेका छन्। श्रेष्ठ क्युटेकमै इलेक्ट्रिकल तथा कम्युनिकसेन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् भने मास्के स्पेस टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्दै छन्।
उनीहरू दुई जना र अरू विभिन्न देशका आठ जना विद्यार्थी मिलेर यी स्याटेलाइट बनाएका हुन्।यस निम्ति नेपालले क्युटेकलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। त्यही पैसाले जापानमै सामान किनेर स्याटेलाइट बनाएको ढकालले जानकारी दिए।यसरी निर्माण भएको स्याटेलाइट क्युटेकले जापानको एरोस्पेस कम्पनी ‘ज्याक्सा’ लाई बुझायो। नेपाली स्याटेलाइट कहाँ लगेर, कसरी उडाउने भन्ने निर्क्यौल गरेको ज्याक्साले नै हो।
सबै काम जापानमा गरिएको स्याटेलाइट अमेरिकाबाट किन उडाइयो? ढकालका अनुसार संसारमा अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायत १२ देशबाट मात्र स्याटेलाइट उडाइन्छ। उडान खर्च र त्यसको निम्ति चाहिने प्रविधि धान्न सबै देश सक्षम छैनन्।
नेपाली बैज्ञानिक दुनियाँलाई चकित पार्दै : फ्रि मा कुरा गर्ने फोन बनाए, हेर्नुस् (भिडियो सहित)
सबै वैज्ञानिकलाई बधाई दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने- नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश